Roobab culus oo la saadaalinaya in ay bishan da’aan | Star FM
Home Wararka Kenya Roobab culus oo la saadaalinaya in ay bishan da’aan
Roobab culus oo la saadaalinaya in ay bishan da’aan
Waaxda saadaasha hawada ee dalka ayaa sheegtay in la rajeynayo in bishan Afaraad ay da’aan roobab xooggan.
Agaasimaha waaxdan Stella Aura ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in roobabka la filayo in ay ka da’aan qaybaha wadanka marka laga reebo gobolka waqooyi bari.
Dadweynaha ku nool meelaha joog ahaan hooseeya ee dhanka harada Victoria iyo buuraleyda galbeedka iyo bariga gobolka Rift Valley ayaa lagu wargeliyay in ay saameyn karaan daadad sidaas awgeedna laga doonayo in ay feejignaadaan.
Shacabka deegaannadan ayaa looga digay in marka ay roobabka socdaan ay maraan meelaha bannaan ama gabbaad ka dhigtaan geedaha si aynan ugu dhufan jac.
Waaxda saadaasha hawada ayaa sidoo kale ka digtay in roobabka culus ee la rajeynayo uu ka dhalan karo dhul go’o.
Agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee Kenya ayaa ku baaqday in la qaado tallaabooyin looga hor tagaya dhimasho iyo burbur hantiyadeed oo ka dhasha roobabka .
Previous articleDowladda oo sheegtay in tallaalka COVID-19 la siiyay ku dhawaad 200,000 oo qof
Next articleDHAGEYSO:Puntland oo faahfahain ka bixisay markab la sheegay inuu soo caariyay